Linn Ko: July 2013
July 30, 2013 ရက်နေ့ က Update ချပေးလာတဲ့ဂိမ်းလေးပါ.. နာမည်ကြီးသလို
ဈေးလည်းကြီးပါသည်… ရဲထောက်လှမ်းရေးနေရာက ဆော့ရမှာပါ…
လူဆိုးတွေကို လိုက်ဖမ်း ၊ရှင်းလင်းရမှာပါ.. ဆိုက်တော့နဲ နဲ ကြီးတယ်ဗျ …
Posted by Linn Ko at 6:06 PM 1 comment:
Posted by Linn Ko at 3:29 PM No comments:
What's in this version 1.6.1:
Posted by Linn Ko at 3:24 PM No comments:
Kings Can Fly will soon have your brain sweating as you try to fly the King through his maze-like kingdom. You needagood eye and sharp wits to navigate the towering
Posted by Linn Ko at 3:18 PM No comments:
Real space shooter game with stunning graphics and attractive gameplay. Explore space inawhole new dimension and start shooting in Star Splitter 3D. Be an intergalactic pilot and start your journey in space by invading alien territory, performing missions, powering up
Posted by Linn Ko at 2:55 PM No comments:
Need For Speed:Most Wanted v1.5.01 Full for Android
Posted by Linn Ko at 2:45 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 11:39 AM No comments:
Android ဖုန်း/Tablet တွေအတွက်7လပိုင်း 30 ရက်နေ့ ၂၀၁၃ မှာ
Viber version အသစ်ထွက်လာပါပြီ။
Viber ဗားရှင်းအသစ်မှာတော့ ရေရေလည်လည် ကိုလန်းပါတယ်။
ယခု version မှာ viber ဆော့ဝဲရဲ့အသွင်အပြင် ဒီဇိုင်းလည်းတော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
Posted by Linn Ko at 11:07 AM No comments:
Posted by Linn Ko at 10:56 AM No comments:
IOS ဘော်ဘော်များကို Youtube Downloader တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် တကယ်သုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ် Pro Tuber ဆိုပီး Apple Store မှာ Free ရယူနိုင်ပါတယ် ဒေါင်းပီးသား Movie တွေကိုလဲ Camera Roll ထဲကို ထည့်ထားလို့ရပါတယ် FB မှာ ပြန်ရှယ်လို့လွယ်တာပေါ့
Posted by Linn Ko at 10:32 AM No comments:
25 ရက်နေ့ကအသစ်ထွက်လာတဲ့ ကားမောင်းဂိမ်းအလန်း ဒုံးပျံနဲ့မောင်းရပါတယ်
Huawei G610-U00 တွင် မြန်မာစာ မမှန်ခြင်းကို ဖြေရှင်းနည်း
1.Root လုပ်ရပါမယ်.... ကျွန်တော် VRoot v1.4.2 နဲ့ Root တာ Root လို့ရပါတယ်..
VRoot Download HERE or HERE or HERE
2.Root Explorer ကို ဖုန်းမှာ Install လုပ်ရပါမယ်..
Posted by Linn Ko at 5:52 PM No comments:
ကျွန်တော် Launcher မသုံးတဲ့သူတောင်ဒီ Buzz Launcher ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ … ပေါ့လဲပေါ့တယ် လန်းလဲလန်းတယ်
Posted by Linn Ko at 2:15 PM No comments:
Posted by Linn Ko at 1:54 PM No comments:
Cover Orange2Version: 1.0 for (iPhone/iPad/iPod touch)
iPhone 3GS,iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch (3rd generation), iPod touch (4th generation), iPod touch (5th generation) and iPad. Requires iOS 4.3 or later. This app is optimized for iPhone 5.
Posted by Linn Ko at 12:46 PM No comments:
ဒီဂိမ်းကိုတော့ တော်တော်များများသိမှာပါ ရေထဲမှာငါးမျှားပြီးတော့ အပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြိး
ဒါကတော့ ကားစစ်တိုက်ဂိမ်း လေးပါ တော်တော်လန်းတယ်ဗျာ
Unlimited Money ဆိုတော့ အကြိုက်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
July 26, 2013 ရက်နေ့ ကထွက်ရှိလာတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ…
ကာတွန်းစက်ရုပ်လေးတွေနဲ့လက်နက်ဆန်းတွေဝယ်ပြီးစစ်တိုက်ရမှာပါ..
ပျော်ဖို့ ကောင်းမယ့်ဂိမ်းလေးပါ… ဆိုက်လည်းသေးပါတယ်…
Posted by Linn Ko at 12:13 PM5comments:
Taxi မောင်းတဲ့ဂိမ်းလေးပါ Driver လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
Cut The Rope ဂိမ်းတွေမှာ ကြိုးလေးတွေဖြတ်ပြီးချိုချဉ်စားတဲ့ဖားလေးဟာ သူစားရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သူ့ရဲ့ဟိုးအရင်က ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေကိုပါ ချိုချဉ်ကျွေးဖို့ အချိန်နောက်ပြန်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုပြီး ရှေးခေတ်တွေကိုအလည်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောက်ခေတ် ၊
Posted by Linn Ko at 12:02 PM No comments:
ဒီဂိမ်းလေးကတော့ လမ်းလေးခွမှာ ကားတွေကို မတိုက်မိအောင် ယဉ်ထိန်းရဲလုပ်ရတဲ့ဂိမ်းလေးပါ
Unlimited Purchase ဆိုတော့ အကြိုက်တွေ့မယ်ထင်ပါတယ် ကစားချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှယူ
စစ်တိုက်ရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ အာကာသယာဉ်ထဲမှာတိုက်ခိုက်တဲ့ ဂိမ်းလေးပါ
Posted by Linn Ko at 11:36 AM No comments:
3D graphics လန်းလန်းနဲ့ ဆော့ရမှာပါ..
တိုက်လေယာဉ်ပစ် စက်သေနတ်ကြီးနဲ့ ဆွဲရမှာနော် …
July 24, 2013 ရက်နေ့ က update ထွက်လာခဲ့ပါတယ်…
နာမည်ကြီးကာတွန်း ဇာတ်ကားလေးကို အခြေခံထားတာပါ…
ဟာသဇာတ်ကောင်းလေး တွေနဲ့ဆော့ရမှာပါ.. ပျော်ရွှင်စေမှာအမှန်ပါပဲဗျာ…
Posted by Linn Ko at 11:03 AM 1 comment:
July 26, 2013 ရက်နေ့ က Update ထွက်ရှိလာတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ….
မိစ္ဆာတွေနဲ့ ဖိုက်ရမှာပါ… ဆော့ဘူးသူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ဂိမ်းလေးပါ…
Offline play နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ… Hack ပြီးသားလေးပါ …
Posted by Linn Ko at 10:51 AM No comments:
Myanmar Font Changer2for Android (Root Access Require)
Android ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေမှာ မြန်မာစာနဲ့ Keyboard ကိုဖုန်းထဲမှာတင် အလွယ်တကူထည့်သွင်းနိုင်ဖို့အတွက် Myanmar Mobile Zawgyi Changer version2v1.0.2 ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။ Myanmar Mobile Zawgyi Changer2မှာ Zawgyi Font , Sony
(Before download this game, you need 4shared account... It can sign up FREE... If you have not 4shared account, go to 4shared.com and make account for download this game... THANK YOU)
Posted by Linn Ko at 2:49 PM No comments:
Android ဖုန်းတွေ ဂိမ်းကစားနေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်..Internet သုံးနေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်...တစ်ခုခုလုပ်နေရင်းနဲ့ မှတ်စရာတခုခုပေါ်လာရင် အလွယ်တကူ ကောက်မှတ်လို့ရမယ့် WriteNow-Notepad pro လေးပါ။
Posted by Linn Ko at 1:44 PM No comments:
MmAccount သည် အလွန် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကြည့်ရှူ့လွယ်သော
အကြွေးစာရင်းကို မှတ်သားပေးသည့် App ဖြစ်ပါသည်။
ပေးရန်နှင့် ရရန် ရှိသော အကြွေးများကို အလွယ်ပင်
RPG Gamer တွေအတွက်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေမဲ့ Respawnables V1.5.2 လေးပါ … Mission သဘောမျိုးလဲဆော့လို့ရတယ်
နောက်တစ်ခုက facebook ချိတ်ပြီးဘော်ဒါတွေ LAN ချိတ်ဆော့လို့ရသေးတယ်နော် Counter Strike Life
Posted by Linn Ko at 11:44 AM No comments:
Pacific Rim v1.1.0 ဘာ Ultimate မှမပါတဲ့ Version ပါ …
စကြဝဠာဂြိုလ်တိုက်ပွဲဘူဆော့ချင်လဲမတိပု … ကျွန်တော်ကတော့တင်ပေးလိုက်ပြီ …
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပေါ့ … ဆွဲကြည့်ပါဆွဲသွားစေရမယ်
Android version 2.3 & up နော်
Posted by Linn Ko at 10:36 AM No comments:
25 July 2013ရက်နေ့ ထွက်လာတဲ့ ဗားရှင်းသစ်လေးပါ…
Posted by Linn Ko at 10:03 AM No comments:
Myanmar Mobile User Group မှ ကို Jit Too တင်ပေးထားသော ပိုစ်အားပြန်လည်တင်ပြပေးထားပါသည်။
Posted by Linn Ko at 9:55 AM No comments:
Posted by Linn Ko at 10:11 AM No comments:
Chainfire 3D 3.3 Pro for Android (Increase Graphic of Android)
ကျွန်တော် Order & Chaos Online 2.1.0 ဂိမ်းကို အစ်ကိုတစ်ယောက်က ဆော့တယ်ဗျ...
အဲ့ဒီမှာ စတာပဲ... သူဆော့တာ ဆော့လို့မရဖြစ်နေတယ်တဲ့...အရင် Version တွေတုန်းက ဆော့လို့ရတယ်တဲ့..... အမှန်အတိုင်းပြောရရင်
Posted by Linn Ko at 11:55 AM No comments:
Prince of Persia Shadow&Flame 1.0.0 for Android (HACKED)
July 24, 2013 ရက်နေ့ ကထွက်ရှိတာပါ ဂိမ်းသစ်လေးပါ…
ဂိမ်းဆိုက်သေးပါတယ်၊ 3D ရုပ်ထွက်နဲ့ ဆော့ရမှာပါ…
Posted by Linn Ko at 11:34 AM No comments:
နာမည်ကြီးဂိမ်းတစ်ခုပါပဲ မှော်ဆန်ဆန် သတ္တဝါလိုအကောင် တွေနဲ့ ဖိုက်ရမှာပါ……….
ရုပ်ထွက်ကလည်း အရင်ထွက်တုန်းကဆော့ဘူးတဲ့သူတိုင်းသိပါတယ် …အလန်းးးးးးးးးးး
စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပြီး…. အရသာရှိရှိဆော့ရမယ်ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုပါ………….
Posted by Linn Ko at 11:30 AM No comments:
Inaworld whereafist to the face isaperfectly viable solution, Mr. Boss has it all. Now he wants to break the greatest fighters ever! Trapped in his giant tower, you must fight your way to the top to take him down! Inspired by the best brawlers of the arcade era, Combo Crew is pure rumble with no virtual buttons to mess
Size: 4.2 Mb | Android: 2.3 and up
Explore the pristine waters ofadeep ocean environment teeming with exotic sea life. Discoverasunken ship, coral reef, and more as sunlight glints off hidden treasure. Schools of fish swim past you whileamanta ray
Size: 6.6 Mb | Android: 2.2 and up
Adventure Unleashed! Team up with friends from all over the world in this online co-operative RPG from Spacetime Studios, creators of the smash-hit Pocket Legends. Your adventures will take you andastable of epic pets through darkly-lit taverns, majestic forests, and dank mines as you root out the evil taking hold of
Posted by Linn Ko at 5:07 PM 1 comment: